HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Midazolam (မီဒါဇိုလန်)
Midazolam (မီဒါဇိုလန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Midazolam (မီဒါဇိုလန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Midazolam (မီဒါဇိုလန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Midazolam (မီဒါဇိုလန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
midazolam ကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းသောက်သုံးပါ။ midazolam ကိုအများအားဖြင့်ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်မီတွင်တကြိမ်သောက်ရလေ့ရှိသည်။ ဆေးပမာဏအနည်းအများသည်သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ဆေးအပေါ်တုန့်ပြန်မှု၊ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အခြားသုံးစွဲနေသောဆေးဝါးများအပေါ်မူတည်ပါသည်။ midazolam ၏ထင်ရှားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာဆေးဖြတ်လက္ခဏာများ (ဥပမာ။။ ခြေလက်များကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်း၊ချွေးအလွန်ထွက်ခြင်း၊အန်ခြင်း၊ဗိုက်နာခြင်း၊ကြွက်တက်ခြင်း၊တက်ခြင်းစသည်) ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးဖြတ်လက္ခဏာများကိုအသေးစိတ်သိရှိလိုလျှင်ဆရာဝန်နှင့်မေးမြန်းဆွေးနွေးပါ။ ဆေးဖြတ်လက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာလျှင်လည်းဆရာဝန်ကိုအကြောင်းကြားပါ။ midazolam ကိုသုံးစွဲနေစဉ်ကာလတွင်ဂရိတ်ဖရုသီးစားခြင်း၊ဖျော်ရည်သောက်ခြင်းတို့ကိုရှောင်ရှားရပါမည်။
Midazolam (မီဒါဇိုလန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Midazolamကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့Midazolamကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Midazolamဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကိုကလေးတွေ၊အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Midazolamကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Midazolam (မီဒါဇိုလန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ယခုဆေးဝါးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏သတ်မှတ်ချက်အရကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် D
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Midazolam (မီဒါဇိုလန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Midazolam (မီဒါဇိုလန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Midazolam (မီဒါဇိုလန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Midazolamဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အောက်ဖော်ပြပါဆေးတွေကိုသုံးစွဲနေတယ်ဆိုရင် midazolam ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ midazolam ကိုအသုံးမပြုတော့တာဘဲဖြစ်ဖြစ်သင်သုံးစွဲနေတဲ့အခြားဆေးတွေကိုပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Amprenavir; Atazanavir; Boceprevir;
Cobicistat; Darunavir; Delavirdine; Flumazenil; Fosamprenavir; Indinavir;
Itraconazole; Ketoconazole; Lopinavir; Nelfinavir; Ritonavir; Saquinavir;
အောက်ဖော်ပြပါဆေးများကိုယေဘုယျအားဖြင့် midazolam နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့မရှိပါဘူး။ သို့သော်အချို့သောအခြေအနေများတွင်မူသုံးစွဲကောင်းသုံးစွဲပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကိုသောက်သုံးရန်လိုအပ်ပါကသင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့်ဆေးတမျိုးသို့မဟုတ်နှစ်မျိုးလုံး၏ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးသောက်ရမည့်အကြိမ်ရေကိုပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Alfentanil; Amobarbital; Anileridine; Aprobarbital; Bromazepam;
Buprenorphine; Butabarbital; Butalbital; Carbinoxamine; Carisoprodol;
Ceritinib; Chloral Hydrate; Chlorzoxazone; Clarithromycin; Codeine; Conivaptan;
Dabrafenib; Dantrolene; Ethchlorvynol; Fentanyl; Flibanserin; Fospropofol;
Hydrocodone; Hydromorphone; Idelalisib; Isavuconazonium Sulfate;
Levorphanol; Lumacaftor; Meclizine; Meperidine; Mephenesin; Mephobarbital;
Meprobamate; Metaxalone; Methadone; Methocarbamol; Methohexital;
Mirtazapine; Morphine; Morphine Sulfate Liposome; Nilotinib; Orlistat;
Oxycodone; Oxymorphone; Pentobarbital; Phenobarbital; Piperaquine;
Posaconazole; Primidone; Propofol; Propoxyphene; Remifentanil; Secobarbital;
Simeprevir; Sodium Oxybate; Sufentanil; Suvorexant; Tapentadol; Thiopental;
အောက်ဖော်ပြပါဆေးများသည် midazolam ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုပို၍ဆိုးကောင်းဆိုးစေနိုင်သည်။ သို့သော်အတူတကွသုံးစွဲခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးသောကုသမှုရလာဒ်ကိုလည်းရစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကိုသောက်သုံးရန်လိုအပ်ပါကသင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့်ဆေးတမျိုးသို့မဟုတ်နှစ်မျိုးလုံး၏ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးသောက်ရမည့်အကြိမ်ရေကိုပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Carbamazepine Cimetidine Crizotinib Cyclosporine DalfopristinDiltiazem
Echinacea Erythromycin Fluconazole Fluvoxamine FosaprepitantFosphenytoin
Ginkgo Biloba Goldenseal Halothane LaropiprantMitotane Phenytoin
QuinupristinRoxithromycin St John&#39;s WortTelithromycin Theophylline
Vemurafenib Verapamil Voriconazole
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Midazolam (မီဒါဇိုလန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Midazolamကအစားအသောက်ဒါမှမဟုတ်အရက်သေစာနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့အစားအသောက်၊အရက်သေစာတွေနဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Midazolam (မီဒါဇိုလန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Midazolamဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Midazolam (မီဒါဇိုလန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
-သောက်ဆေး —–>၁၀ – ၂၀မီလီဂရမ်ကိုကုသမှုမပြုလုပ်မီတခါသောက်ရမည်။ (အကြောထိုးဆေးသို့မဟုတ်အသားထိုးဆေးပေးလျှင်ပိုကောင်းသည်)။
-အကြောထိုးဆေး ——>ကုသမှုမပြုလုပ်မီ၁ – ၂.၅မီလီဂရမ်ကို၂မိနစ်မှ၃မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ပေးရမည်။ ဆေးသွင်းနှုန်းသည်၂မိနစ်အတွင်း၁မီလီဂရမ်ထက်မပိုရပါ။ စုစုပေါင်းဆေးပမာဏ၅မီလီဂရမ်ထက်ပိုလိုလေ့မရှိပါ။
-အသားထိုးဆေး —–>ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်မီနာရီဝက်မှတနာရီခန့်တွင် 0.07 – 0.08 mg/kg ပမာဏပေးရမည်။COPD အဆုတ်ရောဂါရှိသောလူနာများ၊အသက်အန္တရာယ်ရှိသောလူနာများသို့မဟုတ် narcotic အုပ်စုဝင်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသို့မဟုတ်ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောကိုဖိနှိပ်သောဆေးများအသုံးပြုထားသောလူနာများတွင်ဆေးပမာဏကိုလျှော့ပေးရပါမည်။ အများဆုံးပေးနိုင်သောဆေးပမာဏမှာ၁၀မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါသည်။
-ကနဦးဆေးပမာဏ —–>ကုသမှုပြုလုပ်ရန်အလွန်နီးကပ်ချိန်တွင် 1mg/min ထက်မပိုသောအမြန်နှုန်းဖြင့်အကြောသွင်းဆေး၂မီလီဂရမ်ကိုတကြိမ်ပေးရမည်။၂မိနစ်ခန့်ကြာပြီးနောက်လိုအပ်သောမေ့ဆေး/ထုံဆေးအာနိသင်ကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက်နောက်ထပ်ဝ.၅ – ၂မီလီဂရမ်ကိုထပ်မံပေးနိုင်သည်။ စုစုပေါင်းဆေးပမာဏသည်၅မီလီဂရမ်ထက်နည်းရမည်။
-ကနဦးဆေးပမာဏ ——–>အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်တွင်စိတ်ဂယောက်ဂယက်ဖြစ်ခြင်းအားထိန်းချုပ်ရန်အကြောသွင်းဆေး 0.01 – 0.08 mg/kg (၁ – ၅မီလီဂရမ်)ကို၂မိနစ်သို့မဟုတ်၃မိနစ်ကြာအောင်သွင်းပေးရသည်။
-ဆက်လက်ပေးထားရမည့်ပမာဏ —–> 0.02 – 0.2 mg/kg/hrနှုန်းဖြင့်ဆက်တိုက်ပေးထားရမည်။ Opioid အုပ်စုဝင်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများသုံးစွဲနေရသောလူနာများတွင်နှုန်းကိုလျှော့၍ပေးရမည်။
ကလေးတွေအတွက် Midazolam (မီဒါဇိုလန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
(ယေဘူယျအသိပေးချက် – ကလေးလူနာများမှာဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာအတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက်သောက်သုံးရန်စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆိုအသုံးမပြုရသေးခင်မှာစိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ)
-အကြောသွင်းဆေး —–>ကုသမှုမပြုလုပ်မီ၁ – ၁.၅မီလီဂရမ်ကို၂မိနစ်မှ၃မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ပေးရမည်။ ဆေးသွင်းနှုန်းသည်၂မိနစ်အတွင်း၁မီလီဂရမ်ထက်မပိုရပါ။ စုစုပေါင်းဆေးပမာဏ၃.၅မီလီဂရမ်ထက်ပိုလိုလေ့မရှိပါ။
-အသားထိုးဆေး —->ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်မီနာရီဝက်မှတနာရီခန့်တွင် 0.07 – 0.08 mg/kg ပမာဏပေးရမည်။ ပုံမှန်ပေးလေ့ရှိသောပမာဏမှာ၁ – ၃မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ အချို့လူနာများတွင်၁မီလီဂရမ်ပမာဏခန့်ဖြင့်ဆေးအာနိသင် ပြလေ့ရှိပါသည်။
Midazolam (မီဒါဇိုလန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
-သောက်ဆေးရည် —-> 2mg/ml
-ထိုးဆေးရည် —-> 1mg/ml ; 5mg/ml
Midazolamကိုသောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Midazolam (Oral Route). http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/midazolam-oral-route/description/drg-20072182. Accessed July, 17, 2016.
Midazolam. https://www.drugs.com/mtm/midazolam.html. Accessed July, 17, 2016.
Midazolam. http://www.webmd.com/drugs/2/drug- 16685/midazolam-oral/details. Accessed July, 17, 2016.